गर्भनिरोधक औषधिसँग जोडिएका भ्रम, के साँच्चै यसको प्रयोगले बाँझोपन हुन्छ त ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
गर्भनिरोधक औषधिसँग जोडिएका भ्रम, के साँच्चै यसको प्रयोगले बाँझोपन हुन्छ त ?
चैत ३० गते, २०७५ - १५:२५
समाजमा यस्ता औषधिलाई लिएर फरक –फरक धारणा पाइन्छ । जस्तै, गर्भनिरोधक औषधिको प्रयोग गरेमा मोटोपना, हर्मोनसम्बन्धी समस्या, महिनावारीसम्बन्धी गडबडी जस्ता समस्याहरु आउँछ भन्ने सोचका कारण महिलाहरु यसको सेवन गर्न इन्कार गर्छन् ।
गलत धारणास् हरेक चीजको फाइदा र नोक्सान दुवै हुन्छ । यस्ता औषधिहरुसँग जोडिएका फरक–फरक धारणाहरु हुन्छन् । स्वास्थको दृष्टिले सही वा गलत भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्ने भएकाले तपाईंको यस्ता औषधिको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
मोटोपनस् गर्भनिरोधक औषधि वा अन्य औषधिहरुले मोटोपन बढाउने वा नबढाउने भन्ने कुरा यसमा भएको हर्मोनमा निर्भर गर्छ । हरेक मानिसको शारीरिक बनावट फरक–फरक भएजस्तै हर्मोनको मात्रा पनि फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले यसको सेवनले शरीरमा तौल बढ्ने वा नबढ्ने पनि मानिसको शारीरिक बनावटमा निर्भर गर्ने भएकाले यसको सेवन गर्नुपूर्व डाक्टरको सल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
बाँझोपन स् हरेक महिलाको एउटै चिन्ताको विषय हो बाँझोपन । धेरैमा यहि विश्वास छ कि गर्भनिरोधक औषधिको सेवनले बाँझोपन निम्तिन्छ । तर, ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलामा बाँझोपन आउनुमा गर्भनिरोधक औषधिको प्रयोग भन्दा पनि अन्य शारीरिक समस्या हो । उमेर बढ्दै जाँदा गर्भधारण गर्न समस्या आउँने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
क्यान्सर स् गर्भनिरोधक औषधिको प्रयोगले क्यान्सर हुन्छ र यसले भविष्यमा गर्भधारण गर्न समस्या गर्छ । यो मानिसमा फैलिएको भ्रम मात्र भएको डाक्टरहरु बताउँछन् ।
गर्भपतनस् गर्भधारण गरिसकेका महिलाहरुले गर्भनिरोधक औषधिको सेवन गरेमा गर्भपतन हुन्छ भन्ने धारण रहेको छ । वास्तवमा गर्भवती भइसकेकी महिलाले यस्ता औषधिको सेवन गरेपनि यसले कुनै पनि प्रकारको असर गर्दैन ।
चैत ३० गते, २०७५ - १५:२५ मा प्रकाशित
गुलियो कत्तिको मन पर्छ, सावधान ! यस्तो भयंकर रोग लाग्न सक्छ
गुणकारी फल आँपका फाइदा के के हाेलान् ?
मधुमेहबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यी हुन् मधुमेहबाट जोगाउने ६ योगासन
के हो ई–चुरोट ? जसले मस्तिष्कका तन्तुलाई पुरै नष्ट गर्छ
ट्याटू खोप्दै हुनुहुन्छ ?हाेसियार ! एचआईभी पनि सर्न सक्छ (हेर्नुहाेस् भिडियाे)
तपाईँका घरमा स्वच्छ राख्नैपर्ने आठ विषय के हुन्
थाहा पाउनुहोस् ! यस्ता महिलाहरुलाई हुन्छ पाठेघरको क्यान्सर
चितवनमा २६ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ? यसो गरी हेर्नुहोस् त।
चिनीलाई पनि चुरोटलाई जस्तै हानिकारक मान्ने बेला आयो कि?